Oovimba be-ELON MUSK-Funda ukurhweba
tag: U-ELON MUSK
Ukunyuka kweBitcoin njengo-Elon Musk Ucebisa ngemeko yokwamkelwa nguTesla
Ukuhlaziywa: 22 Julayi 2021
Bitcoin (BTC) ndibone ispike esikhulu sokwazisa izolo kulandela izimvo zokuzithemba ezivela ku-Elon Musk kumsitho obungoLwesithathu. UMusk uphinde waphinda wayixhasa inkxaso ye-cryptocurrency yeplanethi kwiphaneli ebonakalayo ebanjwe yiCrypto Council ye-Innovation, ekwabambe noJack Dorsey noCathie Wood.
Emuva ngoMeyi, i-CEO yeTesla yabangela iimeko ezikhoyo zeemarike emva kokubhengeza ukurhoxa kwenkxaso ye-BTC nguTesla malunga neenkxalabo zokusingqongileyo. UMusk uphikise ngelithi eyona mali iphambili kwi-cryptocurrency ibinegalelo elibonakalayo ekonakaleni kwendalo ngenxa yokusetyenziswa kwamafutha ezinto ezazisetyenziswa ngabasebenzi basezimayini.
Nangona kunjalo, ngexesha lesemina izolo, uMusk wagomela ukuba uTesla angaqala ukwamkela iBitcoin kwakhona ukuba abasebenzi basezimayini bafikelela kwiipesenti ezingama-50 kusetyenziso lwamandla ahlaziyekayo. Umphathi we-billionaire uqaphele ukuba:
"Okwangoku ukuba kukho iinzame zokuhambisa abavukuzi be-bitcoin baye kwizinto ezinokuhlaziywa, emva koko uTesla angayixhasa loo nto."
Le ngxelo ibangele ukonwaba kwindawo yoluntu ye-crypto, eyathumela i-BTC ibhabha ngaphezulu kwenqanaba lama- $ 32,000. I-cryptocurrency ifumene i-7.6% ngaphezulu kweeyure ezizayo, inyuka nge-32,950 yeedola. Ngexesha lokushicilela, i-BTC ithengisa malunga ne- $ 32,000.
Amanqanaba aphambili eBitcoin aBukela-nge-22 kaJulayi
Emva kokuqala iveki kwi-bias ye-bearish, i-BTC ibonakala ngathi yehlisile amandla e-bearish. I-cryptocurrency ephambili yathumela i-rally yenkomo ukusuka kwi-29,500 yeedola ukuya kwindawo eyi-33,000 yeedola (i-3,500 16 yeedola eyonyukayo) phantsi kweeyure ezili-31,500. Nangona kunjalo, iibhere ziye zaphinda zasebenza kwinqanaba kwinqanaba leengqondo, ukuthumela i-cryptocurrency kwi-4 yeedola yenkxaso (ekhuthazwe yiyure ye-50 ye-XNUMX SMA).
I-Bitcoin ngoku ithengisa kwinqanaba le-32,000 yeedola njengoko iinkunzi zeenkomo ziya kuzama ukunyusa amaxabiso ngaphezulu kwiiyure ezizayo. Ukuxhathisa kokuqala ngumgca we-32,800 yeedola, apho ukwehla kwethu komgama kuhlala khona. Oko kwathethi, ikhefu elizinzileyo ngaphezulu kwe-33,000 yeedola yokuchasana kwengqondo inokunceda i-BTC iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde ibe namandla.
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 32,800, i- $ 33,000, kunye ne- $ 33,750, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 31,500, $ 31,000, kunye ne- $ 30,500.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.32 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 602.6 billion
I-Bitcoin Dominance: 45.8%
tags Bitcoin, BTC, Cryptocurrency, U-ELON MUSK, iindaba, Ezobuchwephesha
Abathengi ngoku banokuhlawula ngeBitcoin njengoko iTesla iqala ukwamkela iBTC
Ukuhlaziywa: 24 Matshi 2021
Isicwangciso sikaTesla sokuqala ukwamkela Bitcoin (BTC) njengoko iintlawulo zezithuthi zayo zihlala ngoku. I-CEO yenkampani, u-Elon Musk, uqhekeze iindaba nge-Twitter ngoLwesithathu. Ikhetho lokuhlawula iBitcoin longezwe kwiwebhusayithi yenkampani, kunye necandelo elichaza indlela yokwenza iintlawulo ze-cryptocurrency.
UMusk uqaphele ukuba "I-Bitcoin ehlawulwe kwi-Tesla iya kugcinwa njenge-bitcoin, ingaguqulelwa kwimali ye-fiat," ukongeza ukuba inkampani "Usebenzisa kuphela isoftware yangaphakathi kunye nevulekileyo kwaye usebenza amanqaku ngokuthe ngqo." Uhlaziyo kwiwebhusayithi kaTesla iqinisekisile ukuba inkampani okwangoku yamkela kuphela iBitcoin kwaye ayikho enye imali yedijithali.
Iwebhusayithi kaTesla yaphawula ukuba:
Qalisa ukubhatala isipaji sakho se-bitcoin. Unokukhangela ikhowudi yeQR okanye ukope kwaye uncamathisele idilesi ye-bitcoin kunye nesixa ngqo se-bitcoin kwisipaji sakho. ”
Le webhusayithi yaqaphela ukuba:
“Nje ukuba uthumele i-bitcoin kwisipaji sakho, iphepha liya kuhlaziya kungaphelanga nomzuzu omnye… Siza kukuthumelela isiqinisekiso yakuba intlawulo ifunyenwe. Oku kungathatha ukuya kwiiyure ezintandathu. ”
I-Bitcoin iphendula ngokufanelekileyo kwiindaba
UTesla ubhengeze kuqala izicwangciso zakhe zokwamkela iBitcoin njengentlawulo ngokugcwalisa i-US Securities and Exchange Commission (SEC) ekuqaleni kwenyanga ephelileyo. Ikwazise ne-SEC ukuba ithengile i-BTC eyi- $ 1.5 yezigidigidi.
Ukulandela isibhengezo kwinyanga ephelileyo, iBitcoin iphendule kakuhle kwiindaba kwaye yongeza ixesha elitsha. Oko kwathiwa, i-Bitcoin iphendule kakuhle kwakhona kwiindaba namhlanje, njengoko uphawu lwe-cryptocurrency lubonakalise malunga ne- $ 1,000 kwimizuzu nje embalwa emva kokuqhekeka kweendaba. Ngexesha lokushicilela, iBitcoin inyuke malunga ne- $ 2,000.
Okwangoku, uMusk ubalaselisile ukuba ukhetho lokuhlawula iBitcoin luya kufumaneka kubathengi baseMelika nje ngoku. Wongeze ngelithi umhlaba wonke uya kuba nakho ukufikelela kwiintlawulo zeBitcoin ukuphela kwe-2021.
tags Bitcoin, BTC, Cryptocurrency, U-ELON MUSK, tesla